Maitiro ekushandura ma icons eapp pa iPhone | Nhau dze iPhone
Maitiro ekushandura ma icons eapp pa iPhone
Ignatius Room | 10/04/2022 12:00 | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Chinja maapuro ma icons pa iPhone Izvo zvinotitendera kupa yedu iPhone kubata kwemunhu iyo, kusvika pakusvika kweIOS 14, yaingowanikwa munhamba diki yezvishandiso zvakapa iyi sarudzo.
Kana wakaneta nazvo gara uchiona iyo yakafanana icon muWhatsApp, Safari, Teregiramu, Notes, kushandiswa kwebhangi rako ... munyaya ino tinokuratidza matanho ose ekutevera kuti uchinje zvidhori zvemapurogiramu pa iPhone.
1 Kufunga nezvazvo
2 Chinja zvidhori zveapp pa iPhone neiyo Shortcuts app
3 Chinja maapuro ma icons pa iPhone nemamwe maapplication
3.1 Mashandiro ePikicha Widget: Nyore
3.2 Chinja App Icons pa iPhone ne Photo Widget: Nyore
4 Maitiro ekubvisa ma icons emaapplication atakaisa
5 Kwekudhawunirodha zvidhori zveIOS
Chokutanga pane zvose, tinofanira kuziva kuti inoshanda sei uye zvazvinoreva kushandura icon yekushandisa. Chaizvoizvo, Apple haititenderi kushandura icon yezvikumbiro.
Chii chinotibvumira, kuburikidza nekushandisa Shortcuts, kugadzira nzira yekudimbudzira kune application tichishandisa mufananidzo kana icon yatinoda.
Izvi zvinorevei? Kune imwe neimwe nzira yekudimbudzira yatinogadzira kune application, isu tichava nemifananidzo miviri yekuwana iyo application: nzira yekudimbudzira yatakagadzira uye icon yekushandisa.
Mhinduro yedambudziko iri kugadzira folda uko fambisa yepakutanga app icons uye siya zvidhori zvitsva zvatinogadzira padesktop uchitevera matanho andinokuratidza muchinyorwa chino.
MuApp Store tinogona kuwana akasiyana maapplication anotipa custom icon sets rinotevera fondos de pantalla kugadzira madingindira. Zvimwe zvezvishandiso izvi zvakare sanganisira widgets izvo zvinosanganisa zvese nema icons uye ne Wallpaper.
Chinja zvidhori zveapp pa iPhone neiyo Shortcuts app
Sezvandambotaura pamusoro, kushandura zvidhori zvemaapps pa iPhone tinofanira kushandisa maShortcuts application, application yekuti kana usina kuiisa, unogona. Dhawunirodha mahara kuburikidza neinotevera link.
Kana tangoisa application, tinovhura iyo application uye totevera matanho andinokuratidza pazasi:
Dzvanya pane iyo + chiratidzo iri mukona yekurudyi yechishandiso.
Tevere, tinonyora iyo shortcut name.
Tevere, tinya pane Wedzera chiito uye mubhokisi rekutsvaga tinonyora vhura app, uchisarudza mhedzisiro inoratidzwa muchikamu Scripts.
Padanho rinotevera, tinya pane chinyorwa App uye isu tinosarudza kuti ndeipi application yatinoda kuvhura.
Tevere, tinodzvanya pane 4 mitsetse yakachinjika iri mukona yekurudyi uye sarudza Wedzera kune skrini yekumba.
Muhwindo rinotevera tinya pane logo kufanosarudzwa yekupinda kwakananga uyezve kupinda Sarudza mufananidzo kusarudza mufananidzo watinoda kushandisa. Isu tinogona zvakare kutsvaga mufananidzo pamudziyo wedu kana kutora mufananidzo.
Pakupedzisira, tinodzvanya Wedzera.
Pachidzitiro chekumba, nzira yekudimbudzira ichave yakagadzirwa nemufananidzo watakasarudza unomhanyisa WhatsApp. Zvino tinofanira fambisa iyo whatsapp app kune folda uye pachinzvimbo, shandisa nzira yekudimbudzira yatakagadzira.
Chinja maapuro ma icons pa iPhone nemamwe maapplication
Iko kushandisa kwatichashandisa kushandura zvidhori zvekushandisa, iyo Wallpaper uye majeti kuitira kuti vese vatevedze dhizaini yakafanana. Mufananidzo Widget: Nyore.
With iyi app iyo nzira yekushandura ma icons emaapps pa iPhone inokurumidza kukurumidza, sezvo zvichiitwa zvakabatana muhurongwa uye kwete imwe neimwe senge maShortcuts application.
Mufananidzo Widget: Nyore, iko kushandisa kwatinogona download zvemahara. Tinogona kushandisa iyo app pasina chero mhando yekumisa mukuchinjana kuona adSaka bhadhara 22,99 euros kuti uvabvise zvachose.
Iri svondo inovandudzwa nguva nenguva tichiwedzera madingindira matsva zvichienderana nenguva yegore yatinozviwana tiri mairi.
Mufananidzo Widget: Nyorevakasununguka
Kana iyi application isingaite zvatinoda, tinogona kusarudza dzimwe nzira dziripo muApp Store, chero bedzi isu takagadzirira kubhadhara kuzvinyoresa kwavanopa.
Mashandiro ePikicha Widget: Nyore
Iyo Photo Widget App: Yakapusa inoshanda kuburikidza neprofiles. Kana tangosarudza dhizaini (icon, Wallpaper uye widget) yatinoda kushandisa, iyo application ichatikoka kurodha chimiro pa iPhone yedu.
Kana isu tikangoisa iyo mbiri pane mudziyo, iyo skrini yekumba icharatidza zvidhori zveese maapplication pamwe chete neayo ekutanga. Kana isu tikadzima iyo mbiri, ese ma icons matsva anoenderana neiyo theme anobviswa kubva pachigadzirwa.
Chinja App Icons pa iPhone ne Photo Widget: Nyore
Kana tatora uye kuisa application, tinoivhura toenda ku pasi uko sarudzo dzese dzainotipa dzinowanikwa:
Dingindira. Ichi chikamu chinoratidza seti yezvidhori zvekushandisa pane yedu iPhone.
Widget. Muchikamu cheWidget, tinowana majeti anoenderana neiyo icon themes inowanikwa muChikamu chikamu.
chinhu. Mukati meChinhu, mapikicha anofananidzwa anoratidzwa ane zvidhori zviripo muTheme, Icon Packs uye Fonts chikamu.
Zvangu. Muchikamu Changu, iyo tsika yemukati yatakagadzira kushandisa nekushandisa inochengetwa.
Sezvo chatinoda kuchinja zvidhori zve iPhone apps, tinya paTheme uye isu tinofamba pakati pemifananidzo yakasiyana inotiratidza kuti iPhone yedu ichataridzika sei neimwe nhevedzano yemifananidzo.
Kana tawana iyo icon pack iyo yatinoda zvakanyanya, tinodzvanya pairi ona mufananidzo mukuru.
Tevere, tinya pane Sevha mushure mekushambadzira (ad).
Ipapo iyo theme settings window ichavhura. Muhwindo iri, tinogona kugadzirisa:
Wallpaper. Dzvanya pa Sevha kuitira kuti iyo yekumashure mufananidzo weiyo theme ichengetwe muMapikicha application uye nekudaro ugone kuishandisa senge Wallpaper.
Widget. Paunenge uchidzvanya pane Save, iyo widget inoratidzwa ichachengetwa kuitira kuti igone kushandiswa pachiratidziro chemba chemudziyo wedu. Tinogona kugadzira majeti matsva muchikamu cheZvinhu.
Mifananidzo. Ichi chikamu chinoratidza zvese zvazvino zvikumbiro zvekushandisa pamwe neiyo icon yavanozotsiviwa nayo. Chikamu ichi chinotibvumira kuti tisatarise shanduko dzatisingade tomaka dzimwe dzisina kunyorwa nekukasira.
Custom Icon. Muchikamu chino chekupedzisira, tinogona kutibvumira kushandisa chero mufananidzo wakachengetwa muraibhurari sechiratidzo chekushandisa (chiito chatinogonawo kuita neShortcuts application).
Kana tapedza matanho ese, tinya pa Isa XX Icons, uko XX iri nhamba yezvidhori zvekushandisa zvinozotsiviwa zvidhori zvavo.
Muhwindo rinotevera, tinya bhatani Dhaunirodha Profile.
Ipapo hwindo rebrowser richavhurwa, kwatinofanira kudzvanya Bvumidza.
Pakupedzisira hwindo rinoratidzwa kwatakakokwa shandisa nhoroondo yatadhaunirodha.
Iye zvino isu tinofanirwa kuisa iyo profil yatakadhawunirodha. Iyi mbiri inoratidza ese ma icons matsva pachiratidziro chemba chemudziyo wedu. Kuti tiiise, tinowana Zvirongwa> Profile yakatorwa> Isa> Isa.
Kana iyo sarudzo isina kuratidzwa Mbiri yakadzingwa, tinotevera nzira inotevera: Zvirongwa> Zvakawanda> VPN & maneja manejimendi> kumusoro.
Tevere, tinoenda kune iyo Photos application uye toshandisa mufananidzo watakadhawunirodha kubva muapp se Wallpaper (tinya pane bhatani rekugovana uye sarudza. Wallpaper)
Pakupedzisira, yasvika nguva wedzera theme-based widget. Maitiro acho akafanana nekuisa chero imwe widget asi nekusarudza iyo widget kubva kuPhoto Widget app: Nyore.
Zvino, tinofanira fambisa ese epakutanga maapuro kune imwe folda uye tanga kushandisa mapfupi akagadzirwa. Kana iwe usingade kuti zvakamira sei, unongofanira kudzima iyo mbiri yawakaisa.
Chirongwa inotibvumira kuisa ma profiles akasiyana kusanganisa akasiyana icon uye widget dhizaini.
Maitiro ekubvisa ma icons emaapplication atakaisa
Kana isu taneta nechinhu chitsva icho iPhone yedu inoratidza kana kuti hazvisi izvo zvataitarisira, kubvisa zvidhori zvese zvitsva, isu tinongofanira kudzima iyo mbiri yatakaisa (pakudzima iyo profil, mapfupi akagadzirwa neprofile anobviswa, kwete application).
Para delete profile, isu tinofanirwa kuita anotevera matanho:
Isu tinopinda iyo Zvirongwa yemudziyo wedu uyezve mukati General.
Tevere, tinya pane VPN uye maneja yekushandisa uyezve mukati kupidiguka.
Kwekudhawunirodha zvidhori zveIOS
Kana iwe uchida chinja maapponi emapp iyo yaunowanzo shandisa kune mamwe akafanana, iwe unofanirwa kutarisa pawebhu macOS Apps icons.
Pane ino webhusaiti iwe uchawana anopfuura zviuru gumi nezviviri zvidhori zvemarudzi ese, ese ari maviri iOS uye macOS, Windows uye Android zvikumbiro uye zvese zviripo zvekurodha pasina muripo.
Ma icons ese ari Classified by categories uye, nekuwedzera, inotibvumira kuita tsvakiridzo nemazita ezvishandiso kana masisitimu anoshanda.
Mifananidzo ye se dhawunirodha mu .icns fomati zvakananga muApps app.
Imwe webhusaiti inonakidza ye download icon packs kugadzirisa mashandisirwo e iPhone yedu, tinoiwana mukati flat icon. Kunyangwe kunyoreswa kuchidikanwa kurodha zvidhori, mazhinji anowanikwa mahara.
Mifananidzo zvinotorwa mu .png format, saka ivo vanozochengetwa zvakananga muApps app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekushandura ma icons eapp pa iPhone
iOS 16 uye watchOS 9 inogona kunge iri nyeredzi nyowani paWWDC 2022
Yechipiri chizvarwa AirPods Pro ichaona mwenje pakupera kwa2022